Wasiirka Maaliyadda oo sheegay inuu u kuur galay cabashooyinka dekedda Muqdisho – Radio Daljir
Wasiirka Maaliyadda oo sheegay inuu u kuur galay cabashooyinka dekedda Muqdisho
Agoosto 20, 2018 11:17 b 0
“Maanta waxaan kormeer ku tagay Dakadda Muqdisho ka mid ah ilaha dhaqaalaha Dalka kuwa ugu muhiimsan, si aan u hubiyo qaabka ay shaqadu usocoto. Waxaan dul istaagay goobaha ay sida gaarka ah uga socotay shaqada iyo u adeegida shacabka wax kala soo dagaya Dakadda Magaalada Muqdisho” ayuu yiri Wasiirka maaliyadda ee Dowladda Faderaalka Soomaaliya oo maanta booqday dekedda Muqdisho oo masuuliyiin katirsan waaxda canshuuraha loo xiray musqumaasuq.
Wasiirka maaliyadda ayaa waxaa uu sheegay inuu waraystay shacabka wax kala soo dega dekedda oo uu ka waraystay haddii ay jiraan cabashooyin ay qabaan.
Isagoo sii hadlayay ayaa wasiirka uu xusay in hadda ay shaqada u socoto si wanaagsan habeen iyo maalin.
Xujayda oo maanta kusii qulqulaya Banka Carafa